Disk ကို | November 2019
အဆိုပါ hard disk ကို format လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကို
နေ့သည်ကောင်းသော။ Hard Disk ကို Drive ကိုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်ယင်း HDD ကဲ့သို့) - (အကြီးဆုံးဒေသများ၏ဖြစ်ကောင်းတဦးတည်း) ၏အမြဲတမ်းတွေအများကြီး။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့မကြာခဏအလုံအလောက် - ထို hard drive ကို format ချရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အချို့မေးခွန်းများကိုအဘယျ ", အခြားအပေါ် superimposed နေကြသနည်း
အဘယ်မှာရှိလက်ပ်တော့ / ကွန်ပျူတာများအတွက်စျေးပေါပြင်ပ hard drives တွေကိုဝယ်ဖို့?
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်။ ငါလက်တော့ (ကွန်ပျူတာ) အတွက်ပြင်ပ hard drive ကိုဝယ်ယူစဉ်းစား (ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိသည်သောအထူးသဖြင့်သူများ, သီချင်းများထဲမှတစ်ဦးကြီးများစုဆောင်းခြင်း, ရုပ်ရှင်) အများအပြားအဘို့, ထင်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ hard drive ကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအပြင်, ပြင်ပ HDD ကိုသာစတိုးဆိုင်သတင်းအချက်အလက်နိုင်ပေမယ့်အလွယ်တကူဒီတော့ထွက်, တယောက်ကိုတယောက်ကွန်ပျူတာကနေစီးဘို့တလျှောက်ယူအဆင်ပြေနည်းနည်း box ကိုလွှဲပြောင်းနှင့်နေသည်။
Computer ကိုစမ်းသပ်ခြင်း: Processor, ဂရပ်ဖစ်ကဒ်, HDD, RAM ကို။ အကောင်းဆုံး software ကို
အထက်ပါဆောင်းပါးများကိုတဦးတှငျကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Hardware နဲ့တပ်ဆင်ထားအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမရကူညီသော tools တွေပေးပြီ။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ကိရိယာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရစမ်းသပ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုပါက? အဲဒီမှာလျင်မြန်စွာသင့်ကွန်ပျူတာကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးကိရိယာတွေကို Processor ကိုဥပမာ, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့နောက်မိမိအအမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည် (RAM ကိုအဘို့စမ်းသပ်) နဲ့သင်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး hard disk ကို Defragmentation ဖျော်ဖြေဖို့ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ
ကွန်ပျူတာတိုးတက်စေရန်အခါအားလျော်စွာအဆိုပါ hard drive တွေအပေါ်အမိန့်ပြုရန်တွန်းအားပေးသင့်ပါတယ်။ Defragmentation utilities program တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦး sequential နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးကြောင်းဒါကြောင့်သင်တစ်ခုတည်းအပိုင်းအတွင်းဖိုင်တွေရွှေ့ကြကုန်အံ့။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုကွန်ပျူတာဖွင့်အမြန်နှုန်း။ ရက်စွဲကိုရန် disk ကို defragment ဖို့အကောင်းဆုံး disk defragmenter စ Defraggler စမတ်ကို Defrag Auslogics Disk ကိုကို Defrag Puran ကို Defrag Disk ကို Speedup Toolwiz စမတ်ကို Defrag WinUtilities Disk ကိုကို Defrag အို & အိုကို Defrag အခမဲ့ Edition ကို UltraDefrag MyDefrag အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုပရိုဂရမ်များ၏ content, ကွန်ပျူတာ disk ကို defragmenting များအတွက်အများအပြားလူကြိုက်များ tools တွေရှိပါတယ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ မကြာသေးမီကငါတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခြင်းမျိုးစုံအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည် - အမှားနှင့်အတူတစ်ဦးက USB flash drive ကိုမှဒေတာတွေကိုကူးယူသည့်အခါအောက်ပါလိုင်းများ: "အဆိုပါ disk ကိုရေးဖို့-protected ကာကွယ်မှု Remove သို့မဟုတ်အခြား disk ကိုကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ " ။ ဤသည်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင်ပြီး, ဖြေရှင်းချက်၏တူညီသောအမျိုးအစားမတည်ရှိပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ SSD ကို drives တွေကိုနေ့တိုင်း aftermarket အတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာရသည်။ မကြာခင်ပဲငါသူတို့တစ်တွေဇိမ်ခံ (အချို့အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အညီအနည်းဆုံး, သူတို့ရဲ့ဇိမ်ခံ) ထက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ဦး SSD ကိုလက်တော့ Installing အများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်: OS ကို Windows ကို (download, အချိန် 4-5 ကြိမ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်), လက်ပ်တော့ဘက်ထရီရေရှည်စစ်ဆင်ရေး၏ပုံတွေကို loading, SSD ကို disk ကိုခေါက်ဖို့ပိုပြီးခံနိုင်ရည်နဲ့လာပြီးတစ်ခါတစ်ရံအချို့မော်ဒယ်များအပေါ်ဖြစ်ပျက်ရသော rasp (HDD ပျောက်ကွယ်သွား discs တွေကို) ။
ဒါကြောင့် 1-3 စက္ကန့်များအတွက်ကွန်ပျူတာ Hang ဝင်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့ပုံမှန်လည်ပတ်: ဒါဟာ hard drive ကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဘရိတ်အုပ်နှင့် friezes များထဲတွင်ကွန်ပျူတာ hard drives တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်တဦးတည်းနှောင့်အယှက်ရိုနှင့်တွေ့ဆုံ: အားလုံးညာဘက်နေစဉ်, hard drive ကိုအတူလုပ်ကိုင်ကဲ့သို့ထို့နောက် (ထိုဖိုင်တွဲကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် play, ဂိမ်း) နောက်တဖန်အထံတော်ဖွင့်နှင့်ကွန်ပျူတာ 1-2 စက္ကန့်ဆွဲထားတဲ့ ။ သူတို့အတန်ငယ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အခါ (ဤအချိန်တွင်, သင်နီးကပ်စွာနားထောင်ရန်လျှင်, သင် hard drive ကိုလည်မှစတင်ခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုကြားနိုင်) စကားမစပ် ... နှင့်ခဏအကြာတွင်အလိုရှိသောဖိုင်ရရှိသွားတဲ့မကြာခဏက hard disk တွေနှင့်အတူဖြစ်ပျက်: စနစ်များသောအားဖြင့်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒုတိယ disc ကို - မကြာခဏ အခါမလှုပ်ရှားအလုပ်ဒါဟာရပ်လိုက်နိုင်သည်။
ရှာဖွေရေးနှင့် hard disk ကို၏စမ်းသပ်ခြင်း။ HDD နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ
နေ့သည်ကောင်းသော။ Hard Drive - ကို PC အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံး "သံတဖဲ့" ၏တဦးတည်း! သငျသညျအခြားမီဒီယာတစ်ခု Lossless လွှဲပြောင်းအားလုံး data တွေကိုဖမ်းနိုင် - တစ်ခုခုမှားယွင်းနေခဲ့သောသူ၏အဘယျသို့ကြိုတင်သိမှတ်ကြလော့။ အများစုကတော့သည် hard disk ကိုစမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကို hard disk ကိုဝယ်ယူမှာကောက်ယူနေပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပြဿနာမျိုးကိုရသောအခါ: ရှည်လျားသောဖိုင်တွေကူးယူထားပါသည်, ထို PC ကိုဒါပေါ်တွင် drive ကိုမှ (စောင်ရေ) ဖွင့်လှစ်သည့်အခါအချို့ဖိုင်တွေမရှိတော့ဘတ်စေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနှင့်။
အဘယ်သို့ပြုရမည်, ထို hard disk ကို (HDD) ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်?
နေ့သည်ကောင်းသော! ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသည့်အခါများစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ပထမဦးဆုံး processor နှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အာရုံကိုဆွဲပါ။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ hard drive ကို PC မှာမြန်နှုန်းအပေါ်တစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, နှင့်, ငါသည်အပင်မရှိမဖြစ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, အသုံးပြုသူ (သောဘရိတ် hard disk ကို drive ကိုသိရကြလိမ့်မည်လျှော့အပိုဒ် abbr အတွက်ရည်ညွှန်း။
ပြင်ပ hard drive ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မင်္ဂလာပါချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူများ Blog သို့ pcpro100.info! ယနေ့ငါသည်သင့်ကွန်ပျူတာ, လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် tablet များအတွက်ပြင်ပ hard drive ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင့်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, လက်ျာရွေးကောက်သဖြင့်, နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဝယ်ယူရန်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါပြင်ပ hard drives တွေကိုများ၏ရွေးချယ်ရေးသားအပေါငျးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပါမဝယ်ခင်အာရုံစိုက်သင့်သောအသေးစိတျရှေးခယျြစရာ, ဆွေးနွေးရန်နှင့်, သင်တန်း, သင်တို့အဘို့တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတက်ဆွဲရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ SSD ကို disk ကိုရွေးချ: main parameters တွေကို (အရွယ်အစား, ဒါပေါ်မှာ / Write Speed ​​ကို, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဖတ်ပါ။ )
မင်္ဂလာပါ တိုင်းအသုံးပြုသူကသူ၏ကွန်ပျူတာပိုမြန်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုသည်။ ဤပြဿနာကိုနှင့်အတူ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ကြောင့် SSD ကို drive ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ကူညီပေးသည် - ငါအမြန်နှုန်းကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာဖြစ်ပါသည်ကြိုးစားရန်အကြံပြု, Window "ချက်ချင်း" တက်နေတဲ့ - ကသူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုအတွက် SSD ကိုအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သောသူတို့အဘို့ (လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး!
တစ်ဦး hard drive ကိုရွေးချ။ အဘယ်အရာကို HDD ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဘယ်အမှတ်တံဆိပ်?
နေ့သည်ကောင်းသော။ hard disk drive ကို (လျှော့ HDD) - မည်သည့် PC ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ရဲ့အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခု။ အဆိုပါ HDD စတိုးဆိုင်များအားလုံးအသုံးပြုသူဖိုင်များ, ကပျက်ကွက်လျှင် - ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးအမြဲ doable အလုပ်မဟုတ်အတော်လေးခက်ခဲသည်နှင့်။ ထို့ကြောင့်, hard disk ကို၏ရှေးခယျြမှု - မအရှိဆုံးရိုးရှင်းသော၏လုပ်ငန်းတာဝန် (ကျနော်တောင်မှကြောင်းကံတစ်အချို့ရှယ်ယာမပါဘဲမပွုနိုငျလို့ပြောလိမ့်မယ်) ။
ကချပ်ထားပြီးပေမယ့် hard disk, RAW အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
မင်္ဂလာပါ ဤသည်, သင်က hard disk ကိုအတူအလုပ်လုပ်ပုံကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့ရုတ်တရက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လှည့် - သင် "ရေနံ" ၏ပုံကိုတွေ့မြင်: drive ကို format ချမထားဘူး, RAW file system ကိုမဆိုဖိုင်တွေကိုတှေ့မွငျသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကနေဘာမှကူးယူမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအမှု၌အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့ (သိပ်ဒီလိုမျိုးလမ်းဖြင့်, ပြဿနာများ, ငါသည်ဤဆောင်းပါး၏ဆောင်ပုဒ်မွေးဖွားခဲ့သည်)?
လက်ပ်တော့ (netbook) ကိုကွန်ပျူတာကနေ hard drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ တော်တော်လေးပုံမှန်ပြဿနာ: (အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်, ကောင်းစွာ, ဒါမှမဟုတ်မှာအားလုံးပဲသင်၏ PC ကနေအဟောင်း drive ကို left နှင့်စည်းမျဉ်းအဖြစ်တစ်ဦးလက်တော့အတွက် HDD ပေါ်နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုဆန္ဒရှိတယ်တဲ့စွမ်းရည်ထက်လျော့နည်း) ကလက်တော့ပ်ရဲ့ hard drive ကိုမှသင့် hard drive ထဲမှဖိုင်များကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကန့်ပစ်ရန် ။
2018 ခုနှစ်တွင်ပိုကောင်းကွန်ပျူတာ SSD ကို-drive ကိုဘာလဲ: ထိပ်ဆုံး 10
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏မြန်နှုန်းအများအပြားအချက်များကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တုန့်ပြန်အချိန်နှင့်စနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည် - CPU နဲ့ RAM ကိုတာဝန်, ဒါပေမယ့်လှုပ်ရှားမှုကိုအရှိန်, ဒေတာဖတ်နေနှင့်ရေးသားခြင်းအလုပ်ဖိုင်သိုလှောင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဈေးကွက်ထဲမှာအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာဂန္ထဝင် HDD-သယ်ဆောင်ကြီးစိုးပေမယ့်အခုသူတို့ SSD ကိုညှစ်လျက်ရှိသည်။
ကောင်းသောနာရီ! ငါအသုံးပြုသူများသည်, အထူးသဖြင့်ဂိမ်းကစားကွန်ရက် (။ WOT, ကောင်တာ Strike 1.6, wow, etc) တွေအများကြီးထင်ပါတယ်တခါတရံကွန်နက်ရှင်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ကြောင်းကိုသတိပြုမိ: သင်ခလုတ်နှိပ်ပြီးနောက်အဲဒီမှာဂိမ်းထဲမှာဇာတ်ကောင်များ၏တုန့်ပြန်နေတဲ့နှောင့်နှေးလျက်ရှိ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရုပ်ပုံအကွောဆှဲစခွေငျးငှါ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဂိမ်းအမှားဖြစ်ပေါ်စေပြတ်တောက်နေသည်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါအသုံးပြုသူကြိုက်သို့မဟုတ်မ, ဒါပေမယ့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း Windows နဲ့မဆိုကွန်ပျူတာယာယီဖိုင်တွေ (cache ကို, browser ကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းများ, tmp ဖိုင်များ, ဒါပေါ်မှာ။ ဃ) ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုစုဆောင်းမယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်ဖြစ်ပါတယ် "junk ။ " အချိန်တိုင်းသူ 1-2 စက္ကအဘို့အထင်, ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်၏အမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချသည်နှင့် hard drive ကိုလျော့နည်းနေရာလွတ်ဖြစ်လာသည်: PC ကွန်ပျူတာနောက်ဆုံးမှာပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းအရင်ကထက်လုပ်ကိုင်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။
, Bede (ဗစ်တိုးရီးယားအစီအစဉ်ကို) ထိရောက်မှုများအတွက် hard drive ကိုစစျဆေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ (Processor ကို၏စိတ်နှလုံးကိုခေါ်အများအပြား, လမ်းဖြင့်, သင်မူကား Processor ကိုမီးမရှို့ပါလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါဒါမစဉ်းစားကြဘူး။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 99% အတွက်သတင်းအချက်အလက်မရပြန် - - သစ်တစ်ခုတဦးတည်းကိုဝယ်မီးရှို့ hard drive ကိုပါလျှင်အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်) hard disk ကို - ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာငါကွန်ပျူတာနှလုံးပေါ်မှာမထိချင်ကြတယ်။ သငျသညျထိရောက်မှုနှင့်မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများအတွက် hard drive ကိုစစျဆေးဖို့လိုအပ်သည့်အခါ?
အချိန် disk ကို SSD ကိုဘဝခန့်မှန်းချက်။ ငါ SSD ကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မည်မျှမည်သို့သိလား
နေ့သည်ကောင်းသော။ အဆိုပါ SSD ကို (Solid-State Drive ကို - Solid-State disk ကို) ၏ခေါင်းစဉ် drives တွေကိုမကြာသေးခင်ကာလ၌, (ပုံထိုကဲ့သို့သော disk တွေအဘို့အမြင့်မားသောဝယ်လိုအားအပေါ်သက်ရောက်မှု) ကအတော်လေးရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။ စကားမစပ်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့အဘို့အစျေးနှုန်း (ငါဒီအချိန်အလုံအလောက်မကြာမီရောက်လာမည်ကိုစဉ်းစား) တစ်ဦးသမားရိုးကျ hard disk ကို drive ကို (HDD) ၏ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအစာရှောင်ခြင်း SSD ကိုပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်။ SSD ကိုနှင့် HDD ၏နှိုင်းယှဉ်
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ် Laptop ကို) ၏အလုပ်လုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အသုံးပြုသူ, ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းမရှိရှိသေး၏။ ဒီအသိမှာတော့ ပို. ပို. လူများ SSD ကို drives တွေကို (SSDs) ကိုအာရုံစိုက်ဖို့စတင်နေကြသည် - လုနီးပါးမည်သည့်ကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်ဖို့ (အနည်းဆုံးတော့ဒါကြောင့် drive ကိုဤအမျိုးအစားနဲ့ဆက်စပ်မဆိုလူသိရှင်ကြားပြောပါတယ်) ။